Liverpool Oo U Soo Baxday Afar Dhamaadka UEFA Champions League +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Liverpool Oo U Soo Baxday Afar Dhamaadka UEFA Champions League +SAWIRRO
Kooxda Liverpool ayaa u soo baxday afar dhamaadka UEFA Champions League iyada oo guuldaro kale oo 2-1 ah soo baday kooxda Pep Guadiola waxaana Liverpool guushan ku soo hogaamiyay Mohamed Salah iyo Roberto Firmino oo min hal gool dhaliyay qaybtii danbe ee ciyaarta iyada oo dhinaca kale u dhigtay gool uu Gabriel Jesus u saxiixay man City qaybtii hore ee kulaknan.
Liverpool ayaa Manchester City ka cidhibtirtay tartanka UEFA Champions League iyada oo u soo baxday afar dhamaadka tartankan kadib markii ay wadar ahaan 5-1 ah ku soo xusuuqday Man City labadii kulan ee Anfield iyo Etihad Stadium.
Manchester City ayaa Etihad Stadium soo gashay iyada oo dhaarsan isla markaana doonaysay inay ka soo kabsato labadii guuldaro ee xidhiidhka ahaa ee ka soo gaadhay Liverpool iyo Manchester United, wuxuuna Guardiola kooxdiisa ka doonayay in ay sameeyaan taariikh si ay ugu soo kabsadaan guuldaradii 3-0 ahayd ee Liverpool ka soo gaadhay.
Sidii lafa filan karayay koox uu Guardiola hogaaminayo oo kulankii hore guuldaro la soo kulantay waxay Manchester City garoonka soo gashay iyada oo dardar waali ah ku socotay waxayna qaybtii hore ee ciyaarta soo bandhigtay qaab ciyaareed neefsashada u diiday kooxda martida ahyd ee Liverpool.
DAQIIQADII 2 AAD Alla Maxay Bilaabashadii uu Guardiola doonayay ahayd! Manchester City ayaa isla markiiba heshay goolka furitaanka kadib markii uu Gabriel Jesus u saxiixay goolka sare u soo qaaday soo laabashada ay City doonaysay waxaana kubbad uu Van Dijk isaga oo sii dhacaya markii uu Sterling cadaadis kala kulmay soo qabtay Fernandinho kaas oo markale Sterling la ciyaaray wuxuuna xidiga ree England kubbada u bixiyay Gabriel oo dhamaystirka sameeyay.
Ciyaarta ayaa noqotay 1-0 ay Manchester City bilawgiiba hogaanka ku qabtay wuxuuna ahaa gool dhibaato culus ku abuuray Liverpool isla markaana Manchester City siiyay kalsooni ay ku soo laaban karto waxayna sii waday duufaan aan kala joogsi lahayn oo ay goolka labaad ku doonaysay.
Intaa wixii ka danbeeyay waxay ciyaartu noqotay Liverpool oo shaqadeeda iskugu gaysay difaacasho iyo Manchester City oo goolka Liverpool isha ugu haysay sidii ay labaad iyo saddexaad u gaadhi lahayd waxaana jiray fursado badan oo ay abuurayeen Sane, Silva De Bruyne iyo Bernardo laakiin Liverpool ayaa adkaysi badan muujinaysay.
DAQIIQADII 42 AAD Bernardo Silva ayaa si cad ugu muuqday in uu Man City u dhalinayo goolka labaad isaga oo si cad u garaacay Karius laakiin waxa uu arkay darbadiisa oo birta goolka ka soo booday.
DAQIIQADII 43 AAD Man City ayaa isku arkaysay in ay la timid goolka labaad kadib markii kubbad uu Karius iska soo jooyay ay isku qabsadeen Oxlade-Chamberlain iyo Sane waxayna gashay shabaqa Liverpool balse calan wadaha ayaa tilmaamay in offside jiray.
Liverpool ayaa laba jeer oo kaliya halis ku abuurtay goolka Man City laakiin hal mar oo kaliya ayay bartilmaameed samaysay laakiin Guardiola iyo ciyaartoyda Man City ayaa garsooraha uga cabanayay in qaladaad rekoodhe keeni karayay uu kooxdooda ka diiday.
Man City ayaa boqolkiiba 71% boosishanka ciyaarta haysatay halka Liverpool ay kaliya lahayd boqolkiiba 29% laakiin wali waxay ku faraxsanayd in ay halis badan oo goolal looga dhalin karayay ay Man City ka joojisay taas oo ay natiijada si adag ugu ilaashatay.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ahayd mid ayan Manchester City wada hir galin qorshihii ay ciyaarta ka lahayd maadaama oo wali laga doonayay laba gool laakiin wixii ay garoonka ka sameeyeen ayaa ahaa mid cago daalis badan ku samaysay xidigaha Reds iyada oo Henderson si wayn khadka dhexe looga dareemayay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta Liverpool ayaa soo laabtay iyada oo aan ahayn kooxdii qaybtii hore la burburiyay waxayna markeeda bilawday in ay kubbada si buuxda ula qaybsato Man City oo dardartii qaybtii hore hoos looga dhigay.
DAQIIQADII 56 aad Liverpool ayaa dhibaatadii ugu waynayd dhabarka u saartay Manchester City kadib markii uu gool ma gafe Mohamed Salah kooxdiisa u keenay goolka neefta sida xoogan uga soo saaray isla markaana siiyay deganaanshaha buuxa waxayna ciyaartu noqotay barbaro 1-1 ah.
DAQIIQADII 77 AAD Roberto Firmino ayaa ciyaarta hurdada u diray kadib markii uu Otamendi ku ciqaabay qalad xun oo uu galay wuxuuna xidiga ree Brazil dhaliyay goolka Manchester City sida rasmiga ah ugu quus gooyay isaga oo ciyaarta ka dhigay 2-1 ay Liverpool natiijada ciyaarta dhinaca kale ugu dhigtay.
Manchester City ayaa si buuxda u niyadjabtay iyada oo awoodi u yeelan kari wayday in ay xataa abuurto fursadihi badnaa halka Liverpool ahayd kooxda qaybtii labaad shaqada ugu badan qabtay waxayna markale noqotay ciyaar qaybtii hore Man City lahayd isla markaana ay qaybtii labaad Liverpool yeelatay.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-1 ay markale Liverpool ku soo garaacday Manchester City iyada oo wadar ahaan labada kulan ugu awood sheegatay 5-1 waxayan Liverpool u soo baxday afar dhamaadka UEFA Champions League iyada oo Guardiola iyo kooxdiisa tartankan ka cidhibtirtay.